ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ပြည်သူတွေကို ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ် မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်မှာ ပြောဆို (ရုပ်သံ)
ပြည်သူတွေကို ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ် မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်မှာ ပြောဆို (ရုပ်သံ)
ဒူး နေရာ - - - ဒူး
တော် နေရာ - - - တော် ပါ။
ညွှန်ကြားချက်အရ ဆိုင်းငံ. ထားကြောင်း - - -
.. SEA GAME ပြီးသည်နှင်.
လျှပ်စစ်မီး ကိုယခင်ကဲ. သို.အလှည်.ကျ
(လမ်းပေါ်ထွက် ကန်.ကွက် ဆန္ဒပြသူများ မှတ်လောက်
ပြတ်တောင်း / ပြတ်တောင်း ပေးဝေမည် ...
. . . ဖြစ်ကြောင်း / - - - သတင်းရရှိသည် ။
(မှတ်ချက် - - နေပြည်တော် နှင်. V.I.P ရပ်ကွက်များမပါ)
Mom Su is right. The Democracy country controlling by law. The target is that People obey / respect the law, not for take money or penalty. People means inclusive Army, Ministers, Presidents , etc.